China Modern Garden Rattan Wicker Round Bar Stools factory na suppliers | Sun Master
Nọmba nlereanya: WA-33010
Ibu ibu: 315pcs/20′HQ
Agba: Rose Red & Black
Ogige ọgbara ọhụrụ Rattan Wicker Round Bar Stools: Round Bar Stools mere nke aluminom na rattan mere, Ọ bụ ngwaahịa ejiri aka rụọ ya. Na pụrụ iche rose red, tie-na kpochapụwo oji na ọcha, na-ewelite a trendy ọgbara ọhụrụ klas
Ụdị No. WA-33010
Ụdị ANYANWU NKE Ibu ibu 315pcs/20'HQ 800pcs/40’Ụlọ ọrụ HQ
Isi ihe Aluminom na rattan
Oge a Round Bar Stools na-ekpuchi rattan wicker ejiri aka mee, ngwakọta nke uhie uhie pụrụ iche na klaasị ojii na ọcha, nke bụ ụdị agba dị ọhụrụ. Dakọtara na aluminom etiti, nye nkwado siri ike maka elu oche nke oge a. Lekwasị anya na ya na ị ga-ahụ na A ga-enwe ụfọdụ achara ụkpụrụ n'elu nke etiti. Nke a na-enye ndị ọrụ ohere ịnweta nchebe dị mma karịa ka ha na-ejigide atụmatụ ọdịnala
Olu ya pere mpe karịa oche ndị ọzọ, ọ dị mfe iburu mgbe ị na-eme njem, dị ka picnic ezinụlọ n'ime ime obodo, tinye ya n'azụ ụgbọ ala, obere nha ya nwekwara ike igwu egwu n'oge picnic.
Dịka onye nrụpụta, Sun Master na-ekwusi ike iji ihe zuru oke. Mmepụta nwere ahụmahụ na nyocha siri ike, iji hụ na onye ọrụ ọ bụla na-enye ngwaahịa kachasị mma na ọrụ kacha mma.
Nke gara aga: Ngwa ihe eji eri nri aluminom
rattan wicker oche mmanya
Ngwongwo dị n'èzí dị ọnụ ala n'oge a na-agbagọ ...
N'èzí Wicker Rattan oche N'ogbe Commercia...
Lawn Wicker Furniture Factory N'ogbe n'èzí...
Ọrịre dị ọkụ n'èzí na-emegharị Chaise Lounge Elast...
Ogige mpịachi n'èzí dị ọnụ ala Armrest Chai...